Prapta: Yonke into yoBomi ilapha | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 21, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Indawo yam yokuqala exhaswa ngemali yenzelwe Prapta, iwebhsayithi yokunxibelelana nabantu ethi "Yonke into kuBomi ilapha!" Banokuba ngabokuqala ukukwazi ukubanga "Yonke into kwiNethiwekhi yokuNxibelelana nakwiWebhu ye-2.0 ilapha!" Aba bantu bebelukhuni emsebenzini ngokuqinisekileyo!
Ukusuka kumbono wetekhnoloji, itekhnoloji ngasemva Prapta akukho nto imfutshane ngokungaqhelekanga. Indawo yi-100% yeAjax. Iiforamu, iiBlogs kunye neminye imisebenzi ejikeleze Amava oBomi kwinethiwekhi. Kukuphola ukuthatha indawo yokunxibelelana… kunokuba mna, mna, mna okanye wena, wena, wena, Prapta isembindini “thina”. Baqokelela lonke ulwazi kwisicelo esijikeleze amava.
Ndiyakholelwa kwiqela ekujoliswe kulo Prapta mhlawumbi ngabantu abadala abancinci (ndimdala kakhulu ukuba ndingakonwabela amava anjengengxoxo ye-Absinthe engezantsi! :).
Kukwakhona injini yokukhangela eyomeleleyo enokubangisana nayo ikhona online ukuthandana inkonzo. Khawufane ucinge ukuthandana kwi-Intanethi ukuba ibineebhloko, iingxoxo, amava obomi, imiyalezo ekhawulezileyo, iiwijethi kunye nengxoxo ekwi-Intanethi (incoko iyeza kungekudala) Prapta! Ukuba ndandiqhuba inkonzo yokuthandana kwi-Intanethi, ndingangcangcazela ekungcangcazeleni iibhutsi zam kwisisombululo esinjengalesi.
Yonke into kuhlaziyo ayinakuba mnandi, nangona kunjalo, akunjalo? Nangona isicelo siqhubekile ngokungenasiphako (ngenene senzile- bendingenangxaki konke konke), ndicinga ukuba kukho ithuba elikhulu lokuphuculwa kobuhle besicelo. IIMHO, I-Web 2.0 ayisiyiyo nje kuphela i-Ajax ujongano, ikwa malunga nokulula kunye nokusetyenziswa ngokulula.
Uphawu lwe Prapta ayinangqondo kwaye inamacala amabini. I-logo ikwime nkqo ngelixa ujongano ubukhulu becala luthe tyaba ngoko ke alukhangeleki ndawo. Yonke into ekwisikrini yimon-tone, akukho bukhulu, iigradients, okanye isithunzi. Ndiyaqonda ukuba enye yale nto ingenxa yokukwazi ukwenza iphepha ngendlela efanelekileyo kodwa ishiya isicelo kwiflethi encinci (i-pun eyenzelweyo).
Ndingacebisa ujongano lomxholo olomeleleyo kunokhetho lwangoku lokwenza… vumela abantu ukuba batshintshe yonke into kunokuba basebenzise ifonti, ubungakanani befonti kunye nemibala yephepha. I-Web 2.0 imalunga nokuthetha ngokwakho-yile nto yenza ukuba ezinye iinethiwekhi zentlalo zithandwa kakhulu. Kananjalo, ukubekwa kwezinye izinto kuxinene kwaye ayisiyisi-browser. Umzekelo ifonti kunye nokwenza ngokwezifiso umbala akunikezeli ngokuchanekileyo kum:
Oko kwathiwa, kuya kufuneka ndinike Prapta awona manqanaba aphezulu anokubakho ngenxa yesicelo hayi i-aesthetics. Esi sisithembiso esothusayo kwaye abaphuhlisi bafanelwe yikhredithi enkulu! Utyalo-mali kumzobi obalaseleyo onamava ngokusetyenziswa kwewebhu kuya kuqhuba esi sicelo kuluhlu oluphambili noludumileyo. Ndicinga ngokunyanisekileyo ukuba kuphela kwesizathu sokuba ndingazange ndive Prapta ngaphambili!
Ingcebiso yokugqibela: Akukho sidingo sokwazisa isisombululo njenge-Ajax okanye iWebhu 2.0. Abantu abazukusebenzisa isicelo sakho ngezi zizathu. Khuthaza indawo ukuba yintoni-indawo emnandi yokwabelana ngamava, ukuxoxa ngawo, kunye nokufumana abanye!
I-Technorati Rank WordPress ye-Plugin Version 2.0.4 ikhutshwe